नयाँ जागिर(New Job) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
मेगा बैंकले एकैसाथ माग्यो ९८ कर्मचारी, ७४ फ्रेसलाई अवसर
काठमाण्डौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्ज गरी व्यवसाय तथा शाखा बिस्तारमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको मेगा बैंक लिमीटेडले एकैसाथ निकै ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । मेगा बैंक लिमीटेडले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै म्यानेजर लेभलदेखि असिस्टेन्ट लेभलसम्मको पदमा ९८ कर्मचारी मागेको हो । सबैभन्दा बढी असिस्टेन्ट लेभलमा ७४...
एलआइसी नेपालमा ६५ जनाका लागि जागिरको अवसर
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन(नेपाल) लिमीटेडले एकैसाथ ६५ कर्मचारी मागेको छ । बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै यो कम्पनीले १५ ब्राञ्च म्यानेजर र ५० असिस्टेन्ट मागेको हो । जीवन बिमा कम्पनीमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको ३५ वर्ष ननाघेको व्यक्तिले ब्राञ्च म्यानेजरका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ । यस्तै, बैंक वा इन्स्योरेन्स...
बैंकदेखि बिमासम्म जागिरका बग्रेल्ती अवसर, कसले कति कर्मचारी मागे ?
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा जागिरको अवसर खुल्ने क्रम जारी छ । नेपाल राष्टबैंकले गाउँ गाउँमा बैंक पुर्याउने नीति लिएसँगै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सेवा तीव्र गतिमा बिस्तार गरिरहेका छन् । यो क्रममा दिनहुँजसो नयाँ शाखाहरु समेत खुल्ने क्रम समेत उस्तै छ । नयाँ नयाँ शाखा खुलेसँगै त्यहाँ निकै ठूलो संख्यामा...
फेरि खुले वाणिज्य बैंक र बिमामा जागिरका बग्रेल्ती अवसर
काठमाण्डौ । बैंक तथा बिमा कम्पनीहरुको सेवा बिस्तारसँगै ती क्षेत्रमा जागिरका नयाँ अवसरहरु पनि दिनहुँजसो खुलिरहेका छन् । यही क्रममा बुधबार समेत केही ठूला बैंक र बिमा कम्पनी तथा केही साना बित्तीय संस्थाले समेत विभिन्न पदका लागि जागिरको अवसर खुलाइएको सूचनाहरु प्रकाशित गरेका छन् । ‘बैंक अफ दि इयर’को प्रतिष्ठित उपाधि पाएको एनएमबी...
वाणिज्य र विकास बैंकमा जागिरको बग्रेल्ती अवसर, कुनमा कतिजना माग ?
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु सेवा बिस्तारको क्रममा शाखा सञ्जाल बढाउने होडबाजीमा छन् । नेपाल सरकारले समेत हरेक जनताको बैंक खाता अनिवार्य गरिदिएसँगै दूरदराजमा समेत बैंकका शाखाहरु खुल्न थालेका छन् । सरकारले सबै स्थानीय निकायमा बैंक पुर्याउने रणनीति लिएपछि कतिपयलाई दुर्गमसम्म जाने बाध्यता समेत थपिदिएको छ । यसले बैंकका...
महालक्ष्मी बैंकमा जागिरको अवसर, म्यानेजरदेखि असिस्टेन्टसम्म माग
काठमाण्डौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले काठमाण्डौं बाहिर र भित्रका लागि कर्मचारी मागेको छ । बैंकले ब्रान्च म्यानेजर देखि जुनियर एसिसटेन्टसम्मको कर्मचारी माग गरेको हो । व्यस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हकमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ३ वर्षको अनुभव र स्नातक गरेको हकमा ५ वर्षको अनुभव भएकोले ब्रान्च म्यानेजरमा आवेदन दिन सकिने छ ।&n...
पूर्वाधार बैंकले एकैपटक माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी, डेपुटी सीइओदेखि असिस्टेन्टसम्म
काठमाण्डौ । नेपाल सरकार, विभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा स्थापित नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले एकैपटक चारदर्जन बढी कर्मचारी मागेको छ । बैंकले डेपुटी सीइओदेखि असिस्टेन्टसम्मका पदमा दर्जनौ कर्मचारी मागेको हो । यो बैंकले कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरी वाणिज्य बैंकमा १० वर्ष काम गरेको अनुभवप्राप्तले...
ज्योति बैंकले एकैपटक माग्यो ८५ फ्रेस कर्मचारी
काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंकले एकैपटक ८५ कर्मचारी मागेको छ । बैंकले सहायक स्तरका पदका लागि ८५ कर्मचारी मागेको हो । जसमा म्यानेजमेन्ट टेनीतर्फ २० जना, जुनियर असिस्टेन्ट ट्रेनीतर्फ ५० जना र माइक्रोफाइनान्स असिस्टेन्टका लागि १५ जना कर्मचारी मागिएको छ। माइक्रोफाइनान्स असिस्टेन्ट पदमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकोले...
सिभिल लघुवित्तले माग्यो दर्जनौं कर्मचारी, फ्रेसलाई पनि अवसर
काठमाण्डौ । सिभिल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडमा विभिन्न पदमा दर्जनौं कर्मचारीहरुको माग गरिएको छ । सिभिल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा निकट भविष्यमा खुल्न गइरहेका नयाँ शाखा कार्यालयका लागि कर्मचारी माग गरिएको संस्थाले जनाएको छ । मंगलबार कम्पनीले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार...
माइक्रोफाइनान्समा एकैपटक ४९ कर्मचारी माग, विकास बैंकमा पनि अवसर
काठमाण्डौ । सर्लाहीको हरिवनमा मुख्य कार्यालय रहेको सहकार्य लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमीटेडले एकैसाथ ४९ कर्मचारी मागेको छ । दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको यो लघुवित्तले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सहकाय प्रशिक्षार्थीसम्मका पदमा कर्मचारी मागेको हो । सबैभन्दा बढी सहायक प्रशिक्षार्थीमा ३० कर्मचारी मागिएको छ । यो पदमा व्यवस्थापन...
रोजगारी चाहियो ? राेजगार मेला जानूस् !
विराटनगर । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङले विराटनगरमा तीन दिने रोजगार मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग सो महासंघका मोरङ अध्यक्ष नरेन्द्र हुमागाँईले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वैशाख ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म मेलाको आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ), रोजगार विभाग,...
प्रभू बैंकले माग्यो एकैसाथ ठूलो संख्यामा कर्मचारी
काठमाण्डौ । प्रभू बैंक लिमीटेडले एकसाथ ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । बैंकले बित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत रही ‘क’ वर्गको बैंकमा काम गर्न चाहने र व्यवस्थापन पढेर बेरोजगार रहेकाहरुलाई समेत लक्षित गरी एकसाथ ६ दर्जन बढी कर्मचारी मागेको हो । सबैभन्दा बढी ब्राञ्च म्यानेजर, अपरेसन इञ्चार्ज र असिस्टेन्ट रिलेसनसीपका लागि कर्मचारी...
राष्ट्रबैंकले एकैपटक माग्यो १५१ कर्मचारी, कुन पदमा कति ?
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकले एकैपटक निकै ठूलो संख्यामा जागिरको अवसर खुलाएको छ । राष्ट्रबैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै तीन पदमा १५१ का लागि जागिरको अवसर खुलाउँदै अनलाइन दरखास्त आह्वान गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले तृतीय तहको अधिकृत स्तरको सहायक निर्देशक पदमा ४५...
ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग्यो माछापुच्छ्रे बैंकले, व्यवस्थापन पढेका स्थानीयलाई अवसर
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमीटेडले एकसाथ ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । बैंकले २ पदमा काम गर्ने गरी १०६ कर्मचारी मागेको हो । योमध्ये ८४ जना व्यवस्थापन पढेका फ्रेस जनशक्तिले यो बैंकमा जागिरको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । बैंकले रिलेसनसीप म्यानेजर, अपरेसन इञ्चार्ज लगायतका विभागमा काम गर्ने गरी जुनियर अफिसर र अफिसर पदमा २२ जना...
रिलायन्स लाइफले माग्यो चारदर्जन बढी कर्मचारी
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमीटेडले करिब चारदर्जन कर्मचारी मागेको छ । यो जीवन बिमा कम्पनीले चिफ फाइनान्सियल अफिसर, एजेन्सी च्यानल एड, बैंकासुुरेन्स हेड, लिगल डिपार्टमेन्ट हेड, रिसर्च एण्ड प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट म्यानेजर, कर्पोरेट अफेयर्स, डिजिटल मार्केटिङ र ब्राण्डिङ अफिसर, रिइन्स्योेरेन्स अफिसरमा कर्मचारी मागेको हो...